ငါ့ကိုအနီး WysLuxury ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝန်ဆောင်မှု
သင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမှ Privatejetcharterflightservice.com ကတိကဝတ်:
Privatejetcharterflightservice.com ဝေးလံအပိုင်းအဖြစ်လူသိများသည့် FAA စည်းမျဉ်းနှင့်အတူလိုက်နာမှု၌နေသောလေယာဉ်တင်နှင့်အော်ပရေတာနှင့်အတူသာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံခရီးသွားသေချာထံအပ်နှံဖြစ်ပါတယ် 135. အဆိုပါဝေးလံသောအပိုင်း 135 လက်မှတ်လေယာဉ်တင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်စံများကိုဖန်တီးခဲ့, စစ်ဆင်ရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အလိုင်စင်.
ဝေးလံသောအပိုင်းများကသတ်မှတ်ထားသည့်စံချိန်စံညွှန်းများအပြင် 135, Privatejetcharterflightservice.com အားလုံးစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက် Third-party ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစာရင်းစစ်လိုအပ်သဖြင့်ပင်တင်းကျပ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံသတ်မှတ်ချက်များကိုထူထောင်ထားပါတယ်. ဤသည် Third-party ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစာရင်းစစ်, TripCHEQ အားဖြင့်ကောက်ယူ, တစ်ဦးချင်းစီသည်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ထုံးစံ၌ကောက်ယူကြောင်းအာမခံချက်ပေးသွားမှာပါ.
Privatejetcharterflightservice.com တစ်ခုချင်းစီကိုပျံသန်းဖို့နောက်ထပ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတင်းအချက်အလက်တိကျသည်, ငါတို့၏နိုင်စွမ်းအတွက်မာနထောင်လွှားကြာ. Wyvern နှင့်လေကြောင်းဆိုင်ရာသုတေသနအုပ်စု (ARG / အမေရိကန်) ဦးဆောင် Third-party များမှာ, On-site ကိုလေယာဉ်ပျံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပို့ချခြင်းနှင့်သင်္ဘောသားအတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်ချက်များကိုအတည်ပြုအတွက်အထူးပြုတဲ့သူလွတ်လပ်သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစာရင်းစစ်.
ARG / အမေရိကန် TripCHEQ program ကိုတီထွင်ထားပါတယ်, မူသောသင်တို့လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့်စပ်လျဉ်းအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည်. TripCHEQ လေယာဉ်များအော်ပရေတာပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှစ်စဉ်ပြုစုပြီးလေယာဉ်ခရီးစဉ်-by-လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ် အခြေခံ. သူတို့ကိုတန်ဖိုး.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ပရေတာအားလုံး ARG / အမေရိကန်ရွှေဖြစ်ရပါမည်, ရွှေ + သို့မဟုတ်ပလက်တီနမ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော. ထို့အပြင်, သူတို့ရဲ့လေယာဉ်မှူးရိုက်နှိပ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုရပါမည်. ဒါကြောင့်လွတ်လပ်သောထောက်ပံ့သောကွောငျ့ ARG / အမေရိကန် TripCHEQ လေကြောင်းစင်းလုံးငှားဖောက်သည်တန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်, ၎င်းတို့၏ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းဘို့ရွေးချယ်ထားသောလေယာဉ်များနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဲ့ဒီ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာလိမ့်မည်ဟုဘက်မလိုက်အာမခံချက်.
လီယာ 55 ရောင်းရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်
Gulfstream G550 ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပြည်ထဲရေးအသေးစိတ်ကို
Warren Buffett ကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း Jackson က, က MS လေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီအနီးငါ့ကို
Omaha- မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, လင်ကွန်း, ဂရန်းကျွန်း, NE
Arkansas ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ် Bombardier ကို Global Express ကို XRS ဇိမ်ခံကားစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ပျံပျံသန်း Bombardier ကို Global Express ကို XRS လေယာဉ်စင်းလုံးငှားအငှားဝန်ဆောင်မှု ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်တာက်ဆန် ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Wisconsin ပြည်နယ် Chartering ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Wyoming ပဋိညာဉ်စာတမ်းပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Wisconsin ပြည်နယ် ကော်ပိုရိတ်ဂျက်နောဖပြည်၌ charters ခွေးသာလေကြောင်းလိုင်း ဝိန်း Fort Myers ပုဂ္ဂလိကဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ် Gulfstream5လေယာဉ်ပျံစင်းလုံးငှား Gulfstream5ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်တင် Chartered Gulfstream5ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံစင်းလုံးငှား Gulfstream5ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်စင်းလုံးငှား Gulfstream G550 Gulfstream G550 ပြည်ထဲရေး Gulfstream V ကိုအချည်းနှီးသောခြေထောက်ဂျက်စင်းလုံးငှား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂျက်စင်းလုံးငှားတာက်ဆန် ဂျက်လေယာဉ်ကုန်ကျစရိတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ပေါ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်တင်နောဖပြည်၌ charters ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံစင်းလုံးငှားတာက်ဆန် ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံငှားရမ်းနောဖပြည်၌ ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ပျံငှားရမ်းတာက်ဆန် ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား Arkansas ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီဝဲ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီ San Diego မှ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီ Wyoming ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝဲ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို San Diego မှ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝိန်း Fort Myers ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖော်ရွေ ဝဲရောင်းစျေးသတ်မှတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား ဖလော်ရီဒါရောင်းစျေးသတ်မှတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား San Diego မှရောင်းစျေးသတ်မှတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား Tennessee ပြည်နယ်ရောင်းစျေးသတ်မှတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားနှုန်းထားများဖလော်ရီဒါ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားနှုန်းထားများ Tennessee ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှုဝဲ ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားဝန်ဆောင်မှု San Diego မှ ငှား Wyoming များအတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်စင်းလုံးငှား Wisconsin ပြည်နယ် ငှားနောဖပြည်၌များအတွက်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ် ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Wyoming ငှားရမ်း Wisconsin ပြည်နယ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်
မူပိုင်ခွင့်© 2018 https://www.wysluxury.com- ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏. အားလုံးနေရာများတွင်တစ်ဦးချင်းစီပိုင်ဆိုင်လည်ပတ်နေကြတယ်. - အထွေထွေတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အလုပ်သမားများ '' လျော်ကြေးပေး. သင့်ရဲ့ဧရိယာ၌သင်တို့ဒေသခံ Professional ကကိုယ်စားပြုမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူထိခုနှစ်တွင် Get! ****WysLuxury.com တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်မဟုတ်ပါဘူး "လေကြောင်းရန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော" မည်သည့်လေယာဉ်ပျံကိုပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်လုပ်ကိုင်ရန်မပါဘူး.
ဒီ link ကိုလိုက်နာမဟုတ်ပါ Do သို့မဟုတ်သင် site မှပိတ်ပင်ထားပါလိမ့်မည်!